अब सदनमा हुने पहिलो कामको लिष्टमा के के ? - Baikalpikkhabar
अब सदनमा हुने पहिलो कामको लिष्टमा के के ?
दमक, २१ भदौ / अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले भदौ १ गते सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेश सदनमा पेश गर्नेछ । दल विभाजनसम्बन्धी सो अध्यादेश सदनमा पेश गरेर निष्क्रिय पार्ने र थप दल विभाजनको सम्भावनालाई रोक्ने सरकारको योजना छ । यसबारे सत्ता गठबन्धन सहमत भएका छन् । सो अध्यादेश खारेजसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनीहरूले योजना छ ।
यस्तै गत जेठ १५ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको सम्भावित अर्को कार्यसूची रहेको छ । साथै विवादास्पद अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई पनि संसद्मा प्रवेश गराउने सम्भावना रहेको छ ।
यसका अलावा अघिल्लो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पनि संसद्मा पेश हुनेछन् । गत मंसिरदेखि हालसम्म १६ वटा अध्यादेश जारी गरिएका छन् । यीमध्ये केही अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
सोमबार, २१ भदौ, २०७८, बिहानको ०७:५४ बजे